5 Waxyaabood Oo Dumarka Ay Ku Soo Jiitaan Ragga - Aayaha
Aayaha editorOctober 31, 2019
Haddii aad layaabaneyd waxaad intabadan kusoo jiidan karto ragga, shantaan arrimood ayaa ah jawaabta aad raadineysay.
Natiijada kasoo baxday daraasad ay sameysay jaamacadda Manchester, ayaa lagu ogaaday in Bushimaha dumarka ay yihiin meesha ugu soo jiidashada badan.
Si aad u ogolaato tan, waxaad u baahantahay oo dhan ayaa ah inaad eegto sida aad u qurxantahay gaar ahaan markaad marsato Rooseeto Cas.
Cilmi baarayaal ayaa sheegay in ilkaha cad ay yihiin kuwo aad usoo jiidasho badan. Daraasad ay sameeyeen cilmi baarayaasha ayaa lagu shaaciyay in haweenka leh ilkaha cad cad ay yihiin kuwo aad usoo jiidasho badan isla markaana ay raggu ka helaan.
Daraasad kale ayaa shaacisay in ragga ay aad uga helaan haweenka aad u dhoollacadeeya. Tani waa wax qurux badan maadaama dhoollacadeynta sida la ogyahay ay haweenka ka dhigto qurux, intii ay aamusnaan lahaaayeen ama ay wajiga kaduudi lahaayeen.
Ragga ayaa waxaa si weyn usoo jiita haweenka dhoollacadeeya, sida lagu sheegay daraasadda.
Codadka dabacsan ayaa si cad loogu arkaa inay yihiin kuwo macaan sida ay daaha ka rogeen Cilmiraayaal sababtoo ah markii ay gabadha cod dabacsan kula hadasho ninka waxaa la sheegay in dareen ahaan uu usoo dhowaanayo isla markaana ay soo jiidaneyso.
Daraasad gaar ah oo laga sameeyay sawirrada midab-kala-soocidda ayaa lagu qiimeeyay laba sawir oo isla hal naag ah.
Waxay sawir ku gashay midabka Buluuga ah halka ay kan kale ku gashay midabka casaanka ah.
Marka la eegay natiijooyinka sawirrada haweeneyda lagu qiimeeynayay, sawirka ay wadatay dharka casaanka ah ayaa loo arkay laguna qiimeeyay inuu yahay mid aad usoo jiidasho badan rabitaan ahaan iyagoo ragga ay sheegeen in dareen ahaan uu aad usoo jiitay sawirka ay haweeneyda xirnayd dharka casaanka ah.
Arrintaan waxay si cad u sharraxaysaa sababta dharka gaduudan aadka loogu dalbado.
AQRISO WARBIXINO KU SAABSAN KULANKA SARIIRTA